Filohan’ny FJKM Miantso ny rehetra hibebaka sy hiverina amin’Andriamanitra
Mitombo hatrany ireo olona mamoy ny ainy vokatry ny areti-mandoza Coronavirus maneran-tany, antony mampikorontana izao tontolo izao.
Fivondronamben’ny Eveka Miantso ny rehetra ho tony sy hivavaka
Efa manodidina an’i Madagasikara ny areti-mifindra Coronavirus (Covid 19) ankehitriny, hoy ny fanambarana avy amin’ny biraon’ny fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara (FEM) omaly. Miantso antsika rehetra hiombom-bavaka amin’ny Papa François ho an’ireo firenena tratran’izany,
Finoana eto Madagasikara Miha mahazo vahana ny fivavahana Silamo
Araka ny resaka nifanaovan’ny Mgr Georges Varkey Puthiyakulangara, Eveka ao Port Bergé, ao avaratr’i Madagasikara,
taorian’ny fotoam-pivavahana nanokafana ny faha-150 taonany sy ireo fianakavian’ny mpanjaka Ranavalona II izay tonga nivavaka tao. Mandritra ny herintaona no hanaovana ny fankalazana raha tsiahivina ary ny fampiakarana ny afom-pifohazana eto amin’ny firenena no tsangambato. Ny teny voasoratra ao amin’ny Isaia toko faha-60 no entina manainga izao jaobily izao raha ny fantatra. Marihina fa mifandraika amin’ny fanarenana ny rova ity fankalazana ity ka ny filoham-pirenena mihitsy no nanendry ireo mpitantana ny fiangonana ankehitriny. Misokatra ho an’ny rehetra ny toerana.